Amin'ny 27 Jolay, Apple dia hanambara valim-bola amin'ny telovolana faha-2021 | Vaovao IPhone
Amin'ny alalan'ny tranokala fampiasam-bola, Nilaza i Apple fa amin'ny 27 Jolay dia hanambara ny valim-bola mifandraika amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2021, ny telovolana ara-bola fahatelo ho an'ny orinasa. Ity hetsika ity dia hatao amin'ny 14:17 tolak'andro Pacific / 30:XNUMX pm Time Atsinanana, XNUMX minitra alohan'ny hanidiana ny tsenambola.
Ny valim-bola azon'ilay orinasa tato ho ato dia nihoatra ny andrasan'ny mpandinika rehetra, indrindra noho ny asa lavitra ary ny taranaka vaovao iPhone dia mifanaraka amin'ny tambajotra 5G ihany.
Ny fanombohana ny iPad Pro miaraka amin'ny processeur M1 sy iMac miaraka amina processeur iray ihany ary misy amin'ny loko maro karazana, izy ireo dia tokony hanampy ny orinasa hitazona ireo tarehimarika tsara natolony hatreto tamin'ity taona ity, na eo aza ny olana eo amin'ny famatsiana izay iainan'ny indostria iray manontolo.
Ireo olana eo amin'ny famatsiana ireo dia mety hanjary manan-danja kokoa amin'ny volana ho avy ary hisy fiatraikany indray amin'ny famoahana ny taranaka manaraka iPhone, taranaka iray izay tsy hanana ilay kinova kely, hatramin'ny nijanonan'ny Apple famokarana herinandro vitsivitsy lasa izay, noho ny fahombiazana ambany azony teo amin'ny tsena.
Azonao atao ny manaraka an'ity hetsika ity amin'ny alàlan'ny Safari miaraka amin'ny iPhone 7 na avo kokoa na iPad an'ny generasi 5 na avo kokoa. Raha te hanaraka ny hetsika amin'ny Mac ianao dia tsy maintsy tantanan'ny macOS Mojave 10.14 na ho avy izany. Azonao atao koa ny manao azy amin'ny alàlan'ny Chrome, Firefox na Edge, raha toa ka manana ny fanohanan'ny codecs MSE, H.264 ary ACC ireo kinova ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Amin'ny 27 Jolay, Apple dia hanambara ny valiny ara-bola amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2021
Ny iPhone 14 dia hametraka puce 4 nm ary ny iPad Pro manaraka dia chip 3 nm